Xukumadda Somaliland Oo Ka Hadashay Mawqifka Ethiopia iyo Somaliland Ka Istaageen Suldaan Wabar |
Xukumadda Somaliland Oo Ka Hadashay Mawqifka Ethiopia iyo Somaliland Ka Istaageen Suldaan Wabar
Jigjiga(GNN) Dawladdaha Ethiopia iyo Somaliland ayaa ku heshiiyay sidii tallaabo adag looga qaadi lahaa suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo ka falaagoobay Somaliland, isla markaana muddooyinkii u dambeeya ku dhuumaalaysta xuduudaha u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland, gaar ahaana dhinaca Ethiopia.
Maxamuud Aadan Jaamac (Galaal) danjiraha Somaliland ee Ethiopia oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad degaanka Soomaalida Itoobiya, isagoo ka mid ahaa xubnihii dhinaca Somaliland ka socday ee ka qayb galay shir laba geesoodka ahaa ee magaalada Diridhaba ku dhex maray masuuliyiin ka kala socday dawladaha Somaliland iyo Itoobiya ayaa arrinta Wabar ku sheegay mid argagixiso ah.
Safiirka oo si guud uga hadlaya heshiis Somaliland iyo Ethiopia dorraad dhex maray ayaa yidhi “Waxa ugu weynaa qodobadii shirkaa ka soo baxay ee la isku af-gartay in meel looga soo wada jeedsado xagga amniga iyo nabadgelyadda, siiba argogixisada iyo nabad-diidka. Waxaa dawlada Itoobiya aanu isla qaadanay in meel looga soo wada jeesto wixii khal-khal gelinaya Jamhuuriyadda Somaliland, degaanka Soomaalida Itoobiya ama dawlada Federaalka ee Itoobiya.”
Waxa uu intaasi ku daray “Meel baan uga soo wada jeednaa arrimaha Tahriibta oo go’aan ayaa laga gaadhay oo amniga khuseeya, waxa aan u sheegayaa cid alaale cidii tahriibta ka shaqaysa in arrimihii is badaleen oo ay adkaatay sidii wax looga qabanayay iyo ciqaabtii la marinayay tahriibayaasha”.
Waxa kale oo uu tilmaamay Danjirre Galaal, in dawlada Itoobiya ay ka wada hadleen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa suldaan Wabar, isagoo xusay in dawladda federaalka Itoobiya ay u cadaysay in ay tallaabo ka qaadayaan suldaan Wabar iyo cid kasta oo loo arko in ay nabadgeliyadda wax u dhimayso.
“Dawladda Federaalka Itoobiya mudaba waxa ay lahayd haddii aanu ogaano inuu dhulkayaga joogo Wabar ama cid alaale cidii qas gelinaysa ama nabada ka soo horjeeda ama argogixiso lagu sheegi karo tallaabo ayaanu ka qaadaynaa. Wabar waxaan odhan karaa waa argagixiso mar haddii uu hub qaatay oo dad masaakiina wax yeelo u gaystay,” ayuu yidhi Danjire Galaal.
Waxaanu intaa ku daray “Markaa dawlada Itoobiya waanu isla soo hadal qaadnay Wabar iyo wixii la mid ah, dawlada degaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawlada Federaalka ee Itoobiya iyo dawlada Somaliland meel ayay ka wada taagan yihiin Wabar, ninkaasi waa nin sidii Bini Laadin marba dhagax hoostii ku dhuumanaya. Waxa kale oo laga heshiiyay sidii waxyaabaha labada dal wadaagaan wax looga qaban lahaa, oo loo wadi lahaa dekeda Berbera iyo hawlaha kale ee labada dal wadaagaan” ayuu yidhi Safiirka Somaliland u fadhiya Itoobiya.